Luis Suarez Oo Dunida Oo Dhan Soo Dalbatay Kaddib Go'aankii Koeman & Kooxda Ugu Cadcad Illaa Hadda - Gool24.Net
Luis Suarez Oo Dunida Oo Dhan Soo Dalbatay Kaddib Go’aankii Koeman & Kooxda Ugu Cadcad Illaa Hadda
Xiddiga reer Uruguay ee Luis Suarez ayaa saddex qaaradood oo dunida ah laga soo dalbaday maalin kaddib markii uu tababaraha cusub ee Barcelona uu ku wargeliyey inuu raadsado koox uu u ciyaaro oo aanu qorshihiisa xili ciyaareedka dambe ku jirin.
Suarez oo Barcelona kaga soo biiray Liverpool sannadkii 2014kii ayaa isku qoray buugga taariikhda ciyaartoyda ugu goolasha badan, waxaanu hiigsanayay in xili ciyaareedka soo socda oo ah kan ugu dambeeya qandaraaskiisa uu dhaafo ciyaartooyo ka horreeya oo uu Lionel Messi kusoo xigi karo.
Laakiin tababare Koeman ayaa afar ciyaartoy oo uu Suarez ku jiro telefoonka kula hadlay, waxaanu u sheegay inay raadsadaan kooxihii ay u ciyaari lahaayeen ka hor inta aanu suuqu xidhmin, waxaana la sheegayaa inay suurtogal tahay in kooxdu ay burburiyo heshiiskii ay kula jirtay laacibkan gool dhaliyaha ah.
Saacado kaddib markii uu warkani soo baxay, waxa Suarez kusoo dhacay dalabyo ka yimid qaaradda Yurub, Maraykanka iyo Asia, waxaana lasoo xidhiidhay kooxo waaweyn oo u baahan adeeggiisa ciyaareed, kuwaas oo ula diyaar ah inay siiyaan mushaharkii uu Barcelona ka qaadan jiray.
Kooxda reer France ee PSG ayaa noqotay kooxda ugu weyn ee Suarez soo dalbatay, waxanay usoo bandhigeen heshiis uu sannado kaga garab ciyaari karayo saaxiibkiisii hore ee Neymar oo ay Camp Nou kusoo wada qaateen sannado qurux badan oo ay guulo waaweyn u dabbaal-dageen.
Sida uu qoray wargeyska Sport ee kasoo baxa waddanka Spain, PSG ayaa ugu cadcad kooxaha lasoo xidhiidhay Suarez, waxaanay kula wareegii karayaan heshiis xor ah maadaama aanay Barcelona wax lacag ah ku xidhi doonin, isla markaana ay raalli ka yihiin inuu kaliya u faaruqiyo kooxda, isla markaana uu meesha ka baxo mushaharkiisa badan.
33 jirkan ayaa usbuucii mushahar ahaan u qaata lacag dhan £290,000, waxaana la warinayaa in PSG ay ka dalban doonto inuu xoogaa hoos u dhigo lacagtaas si ay u siiyaan qandaraas illaa laba sannadood ah.